Nezvedu - Dhijitari Signage & Vhidhiyo Wall Software
Ehe, isu tiri vanhu chaivo! Ziva zvakawanda nezvedu!
Guy ndiye mutungamiri webhizimusi kune Easy Multi Display. Guy uyo ane makore makumi mana nemana ekuberekwa, ari panjodzi yekutora njodzi, pamwe nemaviri echiFrench neVietnam. Guy anotarisa vana vake 44 sehupenyu hwake hwakanaka! Uyu ndiGuy nemwanasikana wake Iris paBrussels showroom.
Mushure memakore mashanu achishanda semaneja weiyo IT weproji weCarrefour, ave achishanda seyemabhizimusi kweanopfuura makore gumi nemashanu. Guy munhu ari nyore kuenda anofarira kutaura nekuvaka hukama hwakasimba. Guy naPatice vakasangana, Guy paakange achitsvaga digital signage software yedhijitari Hwake Mukamuri. Kwaive kushamwaridzana pakutanga kuona.
Kunyangwe Guy dzimwe nguva anoona hupenyu sezvakaoma, mushure mechibvumirano nemauto akasarudzika, anoda motto ...
- Ndiani anotsunga kukunda. -
Patrice ndiye muvambi wehunyanzvi we Easy Multi Display. Ndiye muFrench, ane makore makumi mana nemashanu okukura anozviti geek uyo anofadzwa nehunyanzvi hwekuita.
Patrice mutengesi ane ushingi uye anga achigadzira software yacho Vitrine Multimedia kweanopfuura makore gumi nemashanu. Vamwe vevatengi vake vanosanganisira Airbus, Unicef, Visa, Canon.
Kupera kwevhiki kushoma gore rega rega, Patrice anotora nguva kubva pane yake yemazuva ese kuita se Vhidhiyo Jockey.
- Iko hakuna matambudziko; pane mhinduro chete. -
Pamwoyo wezvedu zvatinoita chishuwo chedu chekuita bhizinesi rive nyore, nyore uye risingadhuri kune vatengi vedu Kushambadzira kana kuburitsa bhizinesi rako hakufanirwe kutenga ruoko negumbo, uye hazvifanirwe kuda hunyanzvi hwepamberi hwemakomputa.
Isu takagadzira Nyore Multi Ratidza nekuti iripo software yaive yakanyanya kudzvinyirira mutengi. Ivo vaida chivakwa chakaomesesa, tisingataure inodhura pamwedzi fizi.
Nekuvandudza inokurumidza uye yakapusa kushandisa digital signage software iwe unogona kuratidza yako midhiya nenzira yaunoda, ine mashoma technical uye Hardware zvinodiwa.
Yedu EMD kunyorera haina kunyoreswa, kwehupenyu hwese marezinesi uye zvechokwadi haishandise gore.
Chekutanga pane zvese, inodhura zvinotyisa, uye chechipiri, haina kuchengetedzeka nekuti inowanzo gadziriswa nemakambani ayo, kazhinji, anoziva zvishoma kana kusaziva nezve IT chengetedzo.
Sezvo huwandu hwekupaza nyaya * hunowedzera nemhedzisiro ine njodzi iyo izvi zvinogona kusanganisira, vatengi vedu pamasaiti asinganetsi uye makambani akakomba havadi gore re5.0 kuratidza yavo midhiya.
Ita sarudzo imwechete, shandisa software yedu (yakaedzwa uye yakatenderwa nemamwe makambani akanaka eCAC makumi mana, usazeze kukumbira mareferensi edu ...) uye dzivisa kuve unovimba nekambani yechitatu kuratidza mafaera ako enhau.
* 36% emakambani akasangana nedambudziko rekudonha kwedata kana kutyorwa kwegore mumwedzi gumi nembiri yapfuura maererano neongororo yakaitwa naFugue naSonatype.
Kana iwe uchida kutibata, ndapota tarisa kune "taura nesu"peji.
Dhawunirodha KWEMAHARA YEMAHARA
Wana mukana nekukurumidza